अवसरवाद केहो र यसको पहिचान कसरी गर्ने ? « Sansar News
अवसरवाद केहो र यसको पहिचान कसरी गर्ने ?
१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार १३:१२
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अवसरवाद निम्नपुँजीवादी अध्रैयतावाट जन्मने मनोरोग हो । वर्ग संघर्ष र अन्तरसंघर्षमा वर्ग पक्षधराको दृष्ट्रिवाट आफुँलाई स्पष्ट पार्न आनाकानी गर्नु अवसरवादको मुल विशेषता हो ।
अवसरवाद सधैं नै ‘एक्पोज’ हुन चाहँदैन । पार्टीभित्र चल्ने विचार केन्द्रित प्रवृत्तिगत संघर्ष सुसुप्तको बेला अवसरवाद मौन हुन्छ । पार्टीभित्रको प्रवृत्तीगत जब आमने सामने भएर टक्राउन थाल्छ त्योबेला अवसरवाद बीचबीचमा चपाएर बोल्ने ढुलमुल चरित्रमा हुन्छ । यस्तो चरित्रलाइ नेपाली ठेट भाषामा ‘पिपल पाते’, ‘जता मल्कु उतै ढल्कु’र ‘बेसारे प्रवृत्ति’ पनि भनिन्छ ।
अवसरवादको विशेषता सहज, सुघम र अवसरको बेला दशहात उफ्रेर अगाडि सर्ने अवसरको उपयोग गर्ने तर, जब, संकट पैदा हुन्छ, पार्टी, आन्दोलन अफ्ठेरोमा पर्न थाल्छ त्यति बेला पछाडी हट्ने हुन्छ ।
अवसरवादले म कतातिर सुरक्षित रहनसक्छु आत्म केन्द्रित हिसाब गर्दै, ढुलमुलाई रहेको हुन्छ । अवसरवादी होईन भन्ने कुराको छिनोफानो विचार संघर्ष र वर्ग संघर्षमा उसको पक्षधरता कता रहन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । माक्रर्सवाद र पुँजीवादका बीचमा आजको विचार, चिन्तन, प्रवृत्ति र कार्य शैलीको संघर्षमा विचार आन्दोलन प्रधान बनाएर असत्यका विरुद्व सत्यको पक्षमा स्पष्ट उत्रेरमात्र सहि नेतृत्व रहन सम्भव हुन्छ ।
क्रान्तिकारी संकटको सामना गर्दै विचार, पार्टी र आन्दोलनको रक्षा गर्ने साहस र जोखिममा उठाएर आफुँलाई स्पष्ट पार्ने नेताहरूमानै जनताको विश्वास र भरोसा बढ्छ । जनताको त्यो, आस्था, विश्वास र भरोसाको पिरामिडमा खडा हुन सक्ने नेतृत्वले मात्रै देश, जनता, पार्टी, आन्दोलनको रक्षा, सेवा र विकास गर्दै अगाडि बढन सक्छ ।
हरेक कम्युनिष्टहरूको परीक्षण संकटको बेलामात्रै स्पष्ट हुन्छ । अवसरवादको विशेषता सहज, सुघम र अवसरको बेला दशहात उफ्रेर अगाडि सर्ने अवसरको उपयोग गर्ने तर, जब, संकट पैदा हुन्छ, पार्टी, आन्दोलन अफ्ठेरोमा पर्न थाल्छ त्यति बेला पछाडी हट्ने हुन्छ ।
(लेखक अधिकारी जनयुद्धका योद्धा हुन्)